Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Kazakhstan Breaking News » Duulimaadyadii Kazakhstan waxay dib ugu bilaabanayaan 16 dal oo kale hadda
Airlines • Airport • Aviation • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Czechia Breaking News • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Italy War Deg Deg Ah • Kazakhstan Breaking News • Wararka Kuweyt Kuweyt • Wararka Maldives • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Ruushka • Wararka Sri Lanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Turkiga • Wararka Imaaraadka Carabta • Uzbekistan Breaking News
Guddiga dowladda ayaa go'aansaday in la kordhiyo oo dib loo bilaabo adeegga hawada caalamiga ah ee caadiga ah ee Kazakhstan ilaa 16 dal oo adduunka ah oo leh duulimaadyo joogto ah 114 toddobaadkii.
Masuuliyiinta dawladda Kazakhstan ayaa ku dhawaaqay inay dib u bilaabeen adeeggii hawada dhowr dal oo kale.
Gawaarida Kazakh ayaa kordhin doona inta jeer ee duulimaadyada ee Russia, Turkey, Uzbekistan, Germany iyo Imaaraadka Carabta.
Duulimaadyadii Kazakhstan ee Czech Republic, China, Italy, Sri Lanka, Kuwait iyo Azerbaijan ayaa sidoo kale dib u bilaabanaya.
Mas'uuliyiinta Guddiga Kazakh ee ka -hortagga faafitaanka coronavirus waxay ku dhawaaqeen in dadka Kazakhstan ay hadda u duuli karaan 16 waddan oo dheeri ah, laga bilaabo Sebtember 21, 2021.
Guddigu wuxuu qaatay go’aan ah in la kordhiyo oo dib loo bilaabo adeeggii hawada caalamiga ahaa ee joogtada ahaa 16 dal oo adduunka oo dhan ah oo soo noqnoqda 114 duulimaad toddobaadkii.
Sidaas darteed, Kazakhstan Tirada duulimaadyada ee Ruushka ayaa kordhay 54, 7 ilaa Turkiga, 9 ilaa Imaaraadka Carabta, 5 ilaa Uzbekistan iyo Jarmalka, 3 ilaa Maldives, Guddiga Telegram ee Guddiga Duulista Rayidka ee Kazakh ayaa ku dhawaaqay.
Kazakhstan ayaa dib u bilowday duulimaadkeedii Czech Republic, China iyo Azerbaijan. Ka sokow, waxaa jiri doona duulimaadyo ka yimaada Kazakhstan ilaa Talyaaniga laba jeer toddobaadkii, iyo duulimaadyo ka yimaada Kazakhstan ilaa Sri Lanka iyo Kuwait saddex jeer ilaa toddobaad.
Kazakhstan calan side, Hawada Astana, ayaa maanta ku dhawaaqday inay dib u bilaabeyso duulimaadyadii tooska ahaa ee Almaty ilaa Male (Maldives) laga bilaabo 9ka Oktoobar 2021. Duulimaadyada waxaa la howlgalin doonaa afar jeer toddobaadkii Talaadada, Khamiista, Sabtida iyo Axadaha ee Airbus 321LR iyo Boeing 767.
Air Astana waxay duulimaadyo ka bilowday Maldives bishii Diseembar 5, 2020, waxayna shaqeyneysay illaa May 24, 2021 ka hor inta aan la joojin sababo la xiriira xannibaadaha dowladda. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Dalxiiska ee Maldives, Kazakhstan ayaa gashay kaalinta shanaad tiro dalxiisayaal ah oo yimid Male intii u dhaxaysay Janaayo iyo May 2021 kadib Russia, India, Germany iyo Ukraine.